Noo sheeg adiga kugu saabsan
Su'aal Noo sheeg adiga kugu saabsan
sano 2 3 bilood ka hor #7 by Dariussssss
Sidaas, qof kasta hello. Magacaygu waa David oo waxaan ahay u Forum Haguhu cusub. Waxaan u maleeyay in hab fiican si ay u bilaaban-off hawlaha qaar ka mid ah halkan waa in la furo mawduucan iyo in aad dhammaan la kulmaan.
Noo sheeg adiga kugu saabsan, waxa malaynaysaa inaad weligaa waa muhiim.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: rikoooo, PADA52, ricbru, sarrace
sano 2 3 bilood ka hor #14 by rikoooo
Ku soo dhawoow in kooxda Rikoooo ah,
I'am Erik ah abuuraha iyo tababare ee Rikoooo.com.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan halkan aad leedahay ahay, tanu waa Forum. aad tahay tababaraha
Waxaan ka dhigi doonaa annouce ah in our warsidaha soo socda si qof walba oo ku saabsan this forum cusub u sheeg.
qof kasta oo horyaalka Happy
sano 2 3 bilood ka hor #15 by andhar
Hi, kaasuna waa magacayga oo aan
Anigu waxaan ahay enthusiast Diyaaradeed ka Indonesia
Way fiican tahay in aad la kulantid dhammaan
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #16 by Dariussssss
aad oo dhan ku mahadsan tahay ilaa hadda. Ku kalsoonow si ay u arkaan wax badan, posts ka badan oo waxqabad ka badan halkan mustaqbalka.
sano 2 3 bilood ka hor #35 by FCAIR
Hello All my Name Ma Terry (FCAIR) anigu waxaan ahay Chief Crew Cirka ah ka fariistay. Just helay xiiso FSX oo SIM duulaya sannado badan ka dib. site cusub Great, downloads cabsado. Happy Dayuurada in qof walba
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: rikoooo, Gh0stRider203
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #36 by viscount
Hi - Waxaan John xeebta koonfureed ee UK ahay. Hadda ka fariistay, aan Qabille oo diyaarad hore ay maamulaan on ZX81 ah, raran by cajalad, oo ka koobnaa B737 ah (ceelka altimeter iyo ASI ah) wakiil ka muuqaallo aad u blocky duulaya dhexeeya block A iyo block B ee madow iyo caddaan - iyo haddii aad sameeyey waxa kugu habboon arkay "muuqaal", flouride kale madow ugu baaqay C. Ilhaaminta walax. Tan iyo markaas ayaan lahaa Flightsim kasta oo Microsoft ayaa soo saaray, horumarka iyada oo loo marayo kala duwan ee kombiyuutarada ka 8086 ah iyada oo loo marayo 384, 486, Pentium, oo lagu daray dhawr dheeraad ah, si aan I7 hadda. Waxaan heystaa ruqsad gaar ah oo ku saabsan wixii aan leeyihiin laba qof oo ah boqol saacadood on 152s iyo PA28s - mar dambe hadda ay sabab u tahay qiimaha halkan duulaya UK. Wiilkaygiiyow sidoo kale loo isticmaalaa Flightsims ah, helay cayayaanka iyo bartay in ay duusho, iyo haatan la saacadood 4000 hoos suunka on A319 (dhab ah) / 320s waa kaliya oo ku saabsan si ay u tagaan si aan tigidh uu Captain ee. Timid daafaha Rickoooo by Canary Islands muuqaal ah freeware oo waa mid aad u cajiib ah - sidaas mahad badan in. Great si aad u aragto bogga ah Ingiriisi sida inkastoo nool ka France wax ka badan 50 miles my fahamka afkooda waa ka fog tahay wax wanaagsan.
Last edit: 2 sano 3 bilood ka hor by viscount.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: rikoooo, alogie
sano 2 3 bilood ka hor #37 by rikoooo
Hello FCAIR iyo viscount,
Waad ku mahadsan tahay soo bandhigidda iyo soo dhaweyn si forum cusub, waxaan aad xamaasad iyo ugu faraxsanahay inaan halkaan aad leedahay, ha ka cabsan in boostada mawduucyada cusub iyo caawimaad weydiiso bulshada. sidoo kale, haddii aad rabto in aad ku caawiyaan dadka kale, way weyn noqon lahaa, aqoontaada waa mid aad u soo dhawaynayaa halkan, oo aan jeclaan lahaa in ay leeyihiin qaar ka mid ah sida loo, duulaya casharada, Casharrada iyo wixii la mid ah posted in forumka. qayb kasta oo ka dhigi doonaa bulshada ku faraxsanahay.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: viscount, FCAIR
sano 2 3 bilood ka hor #39 by FCAIR
Halkaa marka ay marayso, waxaan ahay sidii wax badan arday sidii aan mar uun. Waxaa iga qaadan kartaa xoogaa si aad u hesho oo dhan tago iyo mooraal ah FSX laakiin mar walba waxaan ka caawin kartaa qof farxad weyn Waxa ay noqon doontaa ii ah inay sidaa sameeyaan.
Blue cirka qof walba ..
sano 2 3 bilood ka hor #44 by Dariussssss
Mar labaad, Ku soo dhawaada Rikooo.
sano 2 2 bilood ka hor #153 by PAYSON
Hiya, magaca magacayga screen waa PAYSON. Waxaan la isticmaalayo computer lagtiisa oo in muddo ah hadda, shukaansi dib ugu soo koobi adeegsaday Ubisoft ee Sturmovik IL2. Moved on inay 10 sano oo WarBirds (dhab iyaga caawiyeen qol ka mid ah dagaalka ah oo ay doonayeen inay soo bandhigto in ciyaarta. Waxaan sidoo kale soo xirtay qaar ka xorroyad ciyaaro looga adkaaday dagaalka sii Ubisoft ee. Oo anigu innaba dhaqdhaqaaqi on ku saabsan 5 sano ee World of Haamaha, weli waxaa ciyaari. (helo qaali) waxaan isticmaali FSX qiyaastii 8 ama 9 sano iyo jacaylka dhacay ay format. waxaan weli ku lug leh garan maayo oo weli toogan-em-up ee Ubisoft. Hadda oo aan helnay oo ku saabsan aad dadka waawayn, waana wax weyn u leedahay xulashada weyn ee diyaaradaha si ay ugu duulaan.
Back in daruuraha,
Time si ay u abuuraan page: seconds 1.000